Toni Chikomo. Kubvunzana nemunyori weThe Dark Goodbye naTeresa Lanza | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo. Toni Chikomo's Facebook.
Toni Chikomo ine nyowani nyowani, Rima rekuonekana kwaTeresa Lanza, yakabuda mwedzi wapfuura. Munyori weBarcelona anosaina mazita akadai se Crystal Tigers, Ice Ngirozi uye trilogy ye Inspector Salgado akandipa izvi indavhiyu kwaanotiudza nezve iri basa nyowani uye nemimwe misoro yakawanda. Kutenda kuzhinji yemutsa uye nguva yakatsaurirwa.
Toni Chikomo. Kubvunzurudza
TONI HILL: Yekutanga inofanira kunge iri nyaya kana komiki uye handikwanise kutaura kuti chaive chii. Ndinoyeuka yekutanga yakandirova semunhu mukuru mushure mekuyaruka kwandakaverenga zvishoma. Zvanga zviri Nyika maererano naGarp, ivo John irving uye zvakaburitsa nyika yese ye "mukuru" mafaro. Ndainzwa sekunge mabhuku aive achine zvinhu zvekutaura kwandiri mushure memakore mashoma ekusavatarisisa zvakanyanya.
Nyaya yekutanga yakanyorwa yandinoyeuka: yaive a nyaya yekosi yekunyora Ini ndanga ndichiita panguva iyoyo, uye yaive yakakurumbira.
TH: Zvakawanda. Kubva Irving, uyo wandambotaura kare, kune zvekare senge Tolstoy kana hanzvadzi Charlotte, Ana Maria Hooch, Mercè Rodoreda kana vanyori vazvino vakaita saFiripi Roth, Coetzee kana Jonathan franken... ndine zvandinoda zvakasiyana kwazvo uye aisazokwanisa kusarudza bhuku rimwe chete kana munyori.
TH: Ndingadai ndakada kunyora a Ana Karenina dhizaini runyorwa kana kuti ndakagadzira mamiriro asingaperi uye ehupenyu seayo anowanikwa mune basa re Kafka. Asi, kutumidza munyori wekare, ndingadai ndakada kunyora Mystic River (Dennis Lehane) uye kuve nekupa hupenyu hwemavara kune vese vanhu vayo.
TH: Chaizvoizvo, kwete. Kudzikama uye kunyararaNdinofunga, kunyange ndichigona leer mundege, nzira dzepasi pevhu kana mabara pasina matambudziko akawandisa. Ini ndinoda kuzviita mu beach kana mu dziva.
Para nyora ehe ini ndoda zvishoma zve kugadzikana kwezvakatipoteredza, asi ndakazviitawo munzvimbo dzeveruzhinji. Kunouya nguva apo ini ndinokwanisa kuzviparadzanisa ndega uye ini handizive zviri kuitika zvakandikomberedza
TH: Nekuti nyora inodiwa Simuka zvishoma temprano uye uzviite mangwanani ose. Iyo Pakati peusiku Ini ndinoona iri kukodzera leer.
AL: Yako nyowani nyowani iri Rima rekuonekana kwaTeresa Lanza. Chii chatinowana mairi?
TH: Zvinogara zvakaoma kupindura izvi nenzira yakapfupika nekuti nganonyorwa seti yezvinhu zvakawanda, asi, ndichiedza kuyedza, ini ndingati iwe uchawana kushungurudza kusagadzikana, ine mavara akanyatso kutsanangurwa epfungwa, ari panguva imwechete iyo mufananidzo wenyika mbiri (iyo yekirasi yakapfuma uye yeavo vanobva kune dzimwe nyika veLatin America mavambo). A nhoroondo yazvino kwazvo izvo, kupfuura kunyengedza kuburikidza zvakavanzika, zvinogona tiite kuti tifunge zvekumwe kupokana izvo zvinotibata isu tese.
TH: Wese. Ini handisi kusiyanisa pakati pemhando, asi pakati pemanzwi uye kutaridzika kunondifadza neavo vasingadaro. Ini ndinowana epic fantasy yakaoma kunyangwe ini ndaive fan of Rwiyo rwechando nemoto uye nhetembo dzinoda kutarisisa kubva kwandiri kupfuura zvandinowanzove nazvo Ini ndinonyatsoda iyo nyaya dzenyaya, uye mumakore achangopfuura ndakaverenga vanyori venhau vakanaka senge Mariana Enriquez o Sarah Tafura.
TH: Ndiri kuverenga bhuku rakadanwa Kusviba, kubva kuna Paul Kawczak, iyo Destino ichangobva kuburitsa, uye imwe novel isati yabuda: Dhiabhori kuseri kwebindu (Pretexts) ye Gines Cutillas, iyo yandichapa pakupera kwaKurume. Ose ari maviri akakurudzirwa.
TH: Zvakanaka, isu tine nzvimbo yakasimba uye yakafara yekudhirowa, saka ini ndingati ndizvo nyore kuposita izvozvi kupfuura makore apfuura (uye ini handisi kutaura nezvezvazvinoburitsa, kunyangwe hazvo iriwo sarudzo inoshanda). Panguva imwe chete ivo vari vazhinji avo vanoda kutsikisa, uye izvo zvinoomesa zvinhu.
Ndinoziva kuti zvinogona kudaro shuwa kusawana imba yechinyorwa ichocho uyo akanyora maawa ekubaira ekurara kana ehupenyu hwehukama, asi iyo makwikwi akaoma uye mikana yevanyori vatsva ishoma. Kune rimwe divi, icho chinhu chakamboitika.
TH: Ini handisi kutsvaga zvinhu zvakanaka kumatambudziko. Ini handifunge kuti chimwe chinhu senge denda rakaburitsa kana kuti chichaunza zvakanakisa mune chero munhu, asi iri kumashure iro rinogona kushandiswa mungano mune ramangwana, hongu.
Ini handisi kunyanya kukwezva kwazviri panguva, chaizvo, asi zvinokwanisika kuti, nekamwe kamufambo, Ndakafunga kumisikidza nyaya mumwedzi iyoyo yekusagadzikana uye dongo. Ini ndinopokana pachokwadi, kunyangwe iyo fungidziro dzimwe nguva inoguma ichititora isu munzira dzataive tisina kumbofunga kuti tifambe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Toni Chikomo. Kubvunzana nemunyori weThe Dark Goodbye naTeresa Lanza